Sweden proposing ambitious aviation greenhouse gas emission reduction target | Airline News
ပင်မစာမျက်နှာ » လေကြောင်းလိုင်း » ဆွီဒင်နိုင်ငံကရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောလေကြောင်းဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်ကိုအဆိုပြုထားသည်
မတ်လ 4, 2019
ဆွီဒင်နိုင်ငံသည် ၂၀၄၅ ခုနှစ်တွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကင်းစင်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ ထိုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိလေကြောင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်အဆိုပြုချက်ကိုမတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပြုချက်အရဆွီဒင်သည်ဆွီဒင်တွင်ရောင်းချသောလေကြောင်းလောင်စာများအတွက်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုအဆိုပြုထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လျှော့ချမှုသည် ၀.၈% ဖြစ်လာပြီး ၂၀၃၀ တွင်တဖြည်းဖြည်း ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့တက်လာလိမ့်မည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့သောလေကြောင်းလောင်စာ ၁% (တန်ချိန် ၁၁၀၀၀) နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၅% (တန်ချိန် ၅၆၀၀၀) နှင့်ညီမျှမည်ဟုခန့်မှန်းရသည် ၂၀၃၀ တွင် ၃၀% (တန်ချိန် ၃၄၀,၀၀၀) ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆွီဒင်နိုင်ငံကိုလေကြောင်းလျော့ချရေးတွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။
“We need forerunners and courageous countries to lead the way in sustainable growth of aviation. I want to congratulate Sweden – it has set the bar very high on what comes to aviation emission reduction by using renewable jet fuel. This announcement setsaclear and bold target, and shows the direction aviation must take in order to reach its emission reduction target. Also, it creates the necessary predictability in demand for Neste and other renewable jet fuel producers to invest in increasing the production,” says Neste’s CEO Peter Vanacker.
၂၀၂၀ တွင်နော်ဝေးမှ၎င်း၏ ၀.၅% ဇီဝလောင်စာရောနှောခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဆွီဒင်နှင့်နော်ဝေသို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးဂျက်လောင်စာပမာဏကိုထောက်ပံ့ရန်စျေးကွက်တွင်စွမ်းရည်အလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။ Neste သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အကြွင်းအကျန်များမှပြုလုပ်သော Neste MY ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးဂျက်လောင်စာ၏ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်ပမာဏကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်များတွင်တိုးပွားလာသောပမာဏများရှိလိမ့်မည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးဂျက်လောင်စာထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထုတ်ကုန်စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်ဟု Neste ကကြေငြာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၅၀ အတွင်းကာဗွန်ကြားခံတိုးတက်မှုအပါအ ၀ င်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ပါးစေရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်များချမှတ်ထားပြီး ၂၀၅၀ တွင်အသားတင်လေယာဉ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရန်လေကြောင်းလိုင်းမှလေကြောင်းလိုင်းများမှလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှလျှော့ချရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ လတ်တလောတွင်ရေရှည်တည်တံ့သောလေကြောင်းလောင်စာသည်လေယာဉ်ပျံများစွမ်းအင်အတွက်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများနှင့်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသည်။